JINGHPAW KASA: စဉ်းစဉ်းစားစား ပြောကြပါ
ရေး ထား ကြ ဘိန်း ဓာ ပြ တွေ ။ မင်း တို့ KIA က
ကချင် လူမျိုး အ ချင်း ချင်း သာ မ က တနိုင်
ငံ လုံး ကို ဒုက္ခ ပေး နေ တဲ့ ကောင် တွေ ။ မြန်မာ့
တပ် မ တော် က မင်း တို့ ကို ချမ်း သာ ပေး မှာ မ
ဟုတ် သ လို ငါ တို့ ပြည် သူ တွေ ထဲ မှာ လဲ မင်း
တို့ မ သ နား ဘူး ။
အခုကော ဘယ်သူတွေက ချမ်းသာနေကြလို့လဲ?
ကိုယ့်ဆန္ဒပြည့်ဝဖို့ ဘဲ ကြိုးစားနေကြတာ .
KIA မျိုး မြန် မြန် တုံး ကချင် ပြည် နယ် နှင့်
ကချင် လူ မျိုး အေး ချမ်း လို့ မ ဆုံး
မှန် လိုက် လေ ။
ကောင်း လိုက် တဲ့ စာ ဆို။
အေအိုင်အေ ကိုအပြတ်အသတ် ထောက်ခံတယ် ဗမာစစ်တပ်ကို ဆက်ပြီးတိုက် မသနားနဲ့ သနားဖို့ မတန်ဘူး။ခွေးစိတ် ရှိတဲ့ကောင်တွေ။
ရဲ လို့ ဆိုလိုက်တာ နဲ့ အားကိုး ရသူ အဖြစ် မြင်ကြသူ မရှိပါဘူး ကိုယ့်ဆီ ရဲလာတာနဲ့ ကြို ဖို့ နေနေတာ ကြိုဖြစ်ရင်တောင် ကိုယ့်ဆီက ငွေ များများ မညစ် ဖြစ်အောင် ကြိုတဲ့ သဘောပါ တကယ်တော့ ရဲ ဆိုတာ ပြည်သူ အားကိုးသင့် သူ သာဖြစ်သင့်တယ် ပြည်သူမုန်းသင့်သူ မဟုတ် သင့်ပါ ပြည်သူတွေပဲ မေး ကြည့် ရဲ ကိုကြိုက်လား မကြိုက်ဘူး လား လို့ လည်ပင်းတောင်ဖြတ်ရဲတယ် ကြိုက်တယ် ပြော ခဲ့ ရင် တစ်ယောက်မှ ကြိုက်တယ်လို့ အသံ မထွက်ဘူး ထွက်ခဲ့ ရင်နင်တို့ ရဲအသိုင်း ၀ိုင်း တွေပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ် မှတ် ထား
Kill all Burmese People. There is no such thing as good burmese People. They are all alike, Burmese police, soldiers government servants and Burmese people in general. They are all cheaters and must be killed. Say whatever you want.
Rights of Kachin has been reluctantly ignored by Burmese Kings, Junta Generals, Aung San, Aung San Suu Kyi. and by Thein Sein until now.. fuck you all burmese... go back to you lower myanmar now... go get fuck yourself. you have no right to come to our land and fuck kachin women.. you are sick people. you don't even deserve to be call human.. you are suchamindless animal..
မြန်မာ နိုင်ငံ တွင်း ရှိ တိုင်းရင်းသား လူမျိုး ပေါင်းစုံ
တို့ ဖြင့် ဖွဲ့ စည်း ထားသော မြန်မာ့ တပ် မတော် သည်
ကချင် ပြည်နယ် အတွင်း ရှိ မြန်မာ နိုင်ငံ သား ကချင်
လူမျိုး များ နှင့် တကွ အခြား သော တိုင်း ရင်း သား
မျိုးနွယ် စု များ ကို ပါ မိုင်း ထောင် ဆတ် ကြေး
ကောက် အဓမ္မ လူစုဆောင်း ကာ နှိပ်စက်လေ့ ရှိ
သော KIA ဆို သည့် ဘိန်းဓား ပြ အဖွဲ့ အား ပြည်သူ
ပြည်သား များ နှင့် တကွ နိုင်ငံ တကာ ၏ ထောက်ခံ
အားပေး မှု နှင့် အညီ ချေ မှုန်း သုတ် သင် မည် ဖြစ်
ကြောင်း သတင်း ကောင်း ပါး အပ် ပါ သည်
ချေမှုန်းသုတ်သင် မည့် အထဲ တွင် ဘယ်နှ ခု
နှစ် က စာမေးပွဲ အောင် မှန်း မသိ သော
အလုပ် မရှိ သည့် တေလေ ကြမ်းပိုး လူသတ်
သမားများ နှင့် ဖွဲ့ စည်း ထား သော KIA
နောက်မြီး ဆွဲ ABSDF များလည်း ပါ ဝင်
ကြောင်း ကို ထပ်တိုး သတင်ကောင်း ပါး ပါ
12-19-12 YA SHANI NA..., VOA.., KAW HTI YU MU ANHTE HPE..., TUBUNG...,NGA KA DA NGA MA AI...,
လျှာအရိုးမရှိတိုင်း ပြောချင်ရာလျှောက်ပြောနေပါ ရပါတယ် ငါတို့ကနိုင်နေတာ ဆိုတော့..............
kia လောက် တော့ မဆိုး ပါ ယောက် ဖ။
နင့်လို ခံ လူ တော့ ရှား တယ် ဗျ။
ငါလိုးမသာတွေ လီးပဲ ဘယ်သူနိုင်နိုင် ငါတို့ပြည်သူပဲ နာတာ
That right. No killed. No war . I want to peace for all.
Ga shaga ai grai masai ai yaw dai "ငါလိုးမသားလီပဲ" nga ai wa lae.....
အေးဗျ ကားမိုင်းရဲစခန်းက မူးယစ်ဆေးဝါး
ရောင်းတဲ့ kia မိသားစုဝင်တွေကို ဖမ်းတာ
ကိုး အပြစ်အရမ်းကြီးလို့ ဝင်စီးတာပေါ့
ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား kia တွေ
ခင်ဗျားတို့ သတ္တိ ရှိရင် စစ်တပ်တွေကို
မတိုက်ရဲဘဲနဲ့ရဲဆိုတာစစ်တိုက်တဲ့အမျိုး
မှမဟုတိတာ တနိုင်ငံလုံးက ခင်ဗျားတို့ ကချင်
တနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေkia ကိုဆန့် ကျင်
လာရင်တော့ kia တွေဇတ်သိမ်းခန်းနီးပြီလို့ 
All Burma army and government getout from kachinland.thats forever peace
မင်းတို့ကkia ကို ဘိန်းစားလို့ ပြောရဲသေးတယ် မင်းတို့ ဗမာစစ်အစိုးရပဲ kachin state ကို စစ်အေးတိုက်ပွဲအ နေနဲ့ ဘိန်းတိုက်ဖျက်ရေးမလုပ်ပဲ ထားတာလေ မင်းတို့ရဲ့နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်အရင်းအနီးက kia ကို ဘိန်းစား ပြောပြီး ချောက်တွန်းဖို့လား သိပြီးသားမို့ ဂရုမစီုက်ဘူး
All of you guys we are the nation of the earth..who want to kill the people ?who came to die at kachin state?who started this problem?that all begun from afew of burma dog general .isn't it?
kia တွေကို အပြတ်ချ ဘို့ သမ္မတကြီး အမိန့်မပေးသေးလို့ ဒီလို ဖင်ခေါင်းကျယ်တဲ့ အီးပေါက် သံထွက်နေ တာ စစ်သား တွေ အမိန့် အရ ငြိမ်ခံနေရတာ တိုက်တော့ လို့ အထက်အရာရှိတစ်ဦ ဦးက အမိန့်ပေးကြည့် သိရအောင်
Right ဒုက္ခသည် စခန်းဆိုတာ kia ဇနီမယား တွေဘဲ
စောက်ပေါ မြန်မာမီဒီယာတွေ ငါလိုးမ eleven လီးလို့ မရေးဘဲငြိမ် နေတာလဲ မင်းတို့ ဂျာနယ် ကချင်ပြည်နယ်မှာ မ ရောင်းရမှာ စိုးလို့လား။ သတင်းဂျာနယ်ကလား ပြုံးပြုံး နဲ့နှုတ်ဆက်တယ် ဆိုတဲ့ သတင်းထောက် ငါကခိင်ပြည်နယ် ပြည်သူ ကားလမ်းဘေး ကထန်ယန် ရွာမှာ စစ်ရောင် အင်္ကျီံ ပါလို့ ဆို ပြီး ကထန်ယန် ချောင်းကမ်းဘေးက နေ ခေါင်းကို ဓါးနဲ့ ပိုင်းပြီး ကန်ချတဲ့ kia
ငါလိုးမ eleven မင်းတို့ ဒါတွေ မသိကြဘူးမဟုတ်ား
ဘီလူးကို မင်းသားထင် တဲ့
kia လက်ပါးစေ eleven
မင်းကခဏခဏ ခွေးအကြောင်းပဲပြောတာ မင်းတို့မိသားစုက ခွေးတွေလား မ အေလိုးကောင် မင်းတို့ဗမာတွေပဲ မ အေလိုးတဲ့ ရာဇဝင် ရှိတာ မင်းတို့ရဲ့မူပိုင် made in burma လေရှားရှားပါးပါး ဒီတစ်ခုပဲရှိတာ ကောင်းကောင်းထိန်းသိမ်း ပြတိုက်ထဲသိမ်းထား မင်းတိုဗမာစစ်ခေးတွေစစ်နိုင်တယ်ဆိုတာရာဇဝင်မရှိဘူးကွ မင်းလေ့လာလိုက် ဇမရှိပဲဟောင် မ နေနဲ့မသာဇော်နံတယ် ကချင်မြေမှာမင်းအတွက်မြေမရှိလို့ အိမ်တိုင်ရာရောက် အ ခေါင်းပို့ပေးမယ် မ အေလိုး အ ပေါ်က ခွေး
So so so funny. If u feel like that, why don't u join the K.I.A? Arr... U are so busy with facebook that u cannot participate in the field. Nobody wants to live in battle. Like u, only talking people are saying to fight again and again. Ha ha ha
it seems you don't care of or too naive of the reality of injustice system of the fucking Burmese Government.
It's called MORAL SUPPORT... even though you can't be in the battlefield with the fellow KIA comrades. right now the KIA soldiers need your material, moral and all means of support.
I think you have brainwashed by the fucking burmese junta. all you care is your mouth to be filled with shits. Don't ever try to undermine with your full shitload of shit mouth.
မျိုး ကန်း မှာစိုး လိုး မှန်း သနား မှန်း မသိ တဲ့ လင်း တ တွေ နား တဖက် ပေါက် တွေ ၊ ချ လိုက် မှ နား ညီး သက်သာ မယ် ။
eleven ဂျာ နယ် Dr သန်း ထွဍ် အောင် ဆောက်ပေါ။ ပ ထွေးဂွေး ဥ မ ပြီး ပိုက်ဆံ စား ပြီး နိူင် ငံ တော် ရောင်း စား တဲ့ ကောင်
အ မေ ကျော် ဒွေး တော် လွမ်း တဲ့ ကောင် အ စစ်။သူ့ ရဲ့ အ ဆိပ် ဂျာ နယ် ကု လုံး ဝမ ဖတ် နဲ့။